Ngabe wena noma umlingani wakho ninelungelo le-alimony? Law & More ikusiza
Umthetho Wesehlukaniso » U-Alimony ozakwethu
Ngabe wena noma umlingani wakho wangaphambili awunayo imali eyanele yokuphila ngemuva kwesehlukaniso? Lapho-ke omunye umlingani unesibopho sokukhokha i-alimony kulowo obethandana naye.
Unelungelo lokuthola nini i-alimony kumlingani wakho wangaphambili? Ngokomthetho, unelungelo lokuhlangana ne-alimony uma, ngemuva kwesehlukaniso, ungenayo imali eyanele yokuzixhasa.
UNGADINGA USIZO LOKUFUNDA INKOLO YOKUXHUMANA?
> Izinga lomlingani womlingani
> Ibala ukugcinwa
> Ukushintsha i-alimony
Unelungelo lokuthola nini i-alimony kumlingani wakho wangaphambili?
Ngokomthetho, unelungelo lokuhlangana ne-alimony uma, ngemuva kwesehlukaniso, ungenayo imali eyanele yokuzixhasa. Izinga lakho lokuphila ngesikhathi somshado lizocatshangelwa ukuze unqume ukuthi unalo yini ilungelo lokuthola umlingani womshado. Ekusebenzeni, omunye wabalingani bobabili uzothola ilungelo loku-alimony. Esikhathini esiningi lona ngowesifazane, ikakhulukazi uma ebhekene nomsebenzi wokunakekela umndeni nezingane. Uma kunjalo, owesifazane uvame ukungabi namholo noma imali etholwayo evela emsebenzini wesikhashana. Esimweni lapho owesilisa egcwalise indima 'yendoda yasendlini' futhi owesimame enza umsebenzi wokuziphilisa, ngokuhamba kwesikhathi indoda ingacela umlingani womlingani.
Izinga lomlingani womlingani
Ngokubonisana, wena nomlingani wakho wangaphambili bangavumelana ngenani le-alimony yomlingani. Uma ungakwazi ukufinyelela esivumelwaneni ndawonye, ​​omunye wabameli bethu uzokujabulela ukukusiza. Hhayi nje ukuthi singakusiza ngenqubo yokuxoxisana, kepha singakwazi nokuthola inani le-alimony lozakwethu kuwe. Sikwenza lokhu ngokwenza ukubalwa kwezondlo.
Ijaji ngeke libheke kuphela isimo sezezimali salowo othola imali yesondlo, kodwa futhi nesimo sezezimali salowo okhokha imali yesondlo. Ngokwesisekelo salezi zimo zombili, inkantolo izonquma ukuthi ngabe ngubani kini onelungelo lokuthola i-alimony futhi, uma kunjalo, inani le-alimony. Kwezinye izimo, kungenzeka ukuthi empeleni unelungelo lesondlo sozakwethu, kepha imininingwane yezezimali yalowo obethandana naye naye ikhombisa ukuthi akakwazi ukukhokha i-alimony yomlingani wakho.
Ukubalwa kokulungiswa kwesibalo kuyinkimbinkimbi kakhulu ngoba kufanele kubhekwe izinto eziningi. Law & More uzokuthokozela ukufeza ukubalwa kwe-alimony kwelingani kwakho. .
Inani lozimele bomlingani lincike kwisidingo somuntu othola i-alimony kanye namandla omuntu okufanele akhokhe i-alimony. Ukuze unqume izidingo zomamukeli we-alimony, izinga cishe le-60% lemali engenayo yomndeni likhishwe izindleko zanoma yiziphi izingane.
Ukunquma umthamo wezezimali
Ukubalwa kwamandla okuthwala umthwalo kwenzelwa womabili amaqembu. Lokhu kubalwa kunquma ukuthi umuntu onecala lesondlo unemithamo eyanele yezimali ukuze akwazi ukukhokha i-alimony. Ukuze unqume umthamo wezezimali womuntu okufanele akhokhe i-alimony, imali ayitholayo kufanele iqale inqunywe. Umkhokhi we-alimony angaqala ngokudonsela inani lezindleko kule mali. Lezi yizindleko ikakhulukazi okufanele zikhokhelwe umuntu okhokhela i-alimony ukuze akwazi ukwaneliswa (izindleko).
Ekugcineni, ukuqhathanisa umthwalo ophethe umthwalo kumele kwenziwe. Lokhu kuqhathanisa kusetshenziselwa ukubala inani lesondlo amaqembu anenkululeko elilinganayo yezimali. Ubukhulu besikweletu semali yesondlo buqhathaniswa nobungako besikweletu semali yesondlo. Umqondo ngemuva kwalokhu ukuthi umuntu oboleka imali yesondlo akufanele abe sesimweni esingcono sezimali kunokukweleta okweletayo ngenxa yokukhokha imali yesondlo.
Ungathanda ukwazi ukuthi isimo sakho sezezimali sizoba yini ngemuva kwesehlukaniso sakho? Ukuxhumana Law & More futhi singasebenza nawe ukuthola ukuthi kungakanani okufanele ukhokhelwe noma ukwamukela.
Uma ufuna ukukhansela ngokweqile noma ukuguqula i -onyony yozakwethu, lokhu kufanele kwenziwe enkantolo. Singasifaka isicelo sokushintsha enkantolo esikhundleni sakho. Inkantolo ingaguqula i-alimony yozakwethu, okungukuthi yanda, yehle noma isethwe ku-zero. Ngokomthetho, kumele kube khona 'okuguqukayo kwezimo'. Uma inkantolo ithola ukuthi akukho shintsho lwezimo, isicelo sakho ngeke sivunyelwe. Lo mqondo awuchazeki futhi emthethweni ngakho-ke ungathinta izimo ezahlukahlukene. Empeleni, lokhu kufaka phakathi ushintsho ezimweni zezezimali komunye wabalingani bakho bokuqala.
Ukuqedwa kwe -onyony yomlingani
Isibopho sokukhokha i-alimony yozakwethu singaphela kulezi zimo ezilandelayo:
• Uma kwenzeka kushona umlingani wakho noma owashade naye;
• uma isikhathi esiphezulu sesondlo esinqunywe yinkantolo siphelelwe yisikhathi;
• uma umuntu othola imali yesondlo eshada futhi, engena ebambisaneni elibhalisiwe noma eqala ukuhlala ndawonye;
• uma izimo zezezimali sezishintshile futhi umuntu othola isondlo angaziphilisa
Abameli bethu besahlukaniso banolwazi ngemithetho yomndeni kanye neyolwazi lwebhizinisi futhi ngenxa yalokho babekwa kahle ukukunikeza usizo lwezomthetho nolwezezimali kulezi zimo. Ngabe udinga ummeli wedivosi? Ukuxhumana Law & More.